Shirkad Jalaato iyo Ra’isulwasaaraha Israa’iil Oo Isku Haya Dhulka Falanstiin Laga Haysto | Gaaroodi News
Shirkad Jalaato iyo Ra’isulwasaaraha Israa’iil Oo Isku Haya Dhulka Falanstiin Laga Haysto
Shirkadda Ben & Jerry’s oo sameysa Jalaatada ayaa sheegtay inay joojinayso iibinta jalaatada ay ku iibinayaan dhulka Falastiin ee Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus.
Shirkadda ayaa sheegtay in “aysan la jaanqaadayn qiyamkeeda in jalaatada Ben & Jerry lagu iibiyo dhulka la haysto ee Falastiin.
Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus ayaa waxaa gacanta ku haysay Israa’iil tan iyo ilaa 1967.
Shirkadan sameysa Jalaatada ayaa sheegtay in talaabadan ay ka tarjumeyso walaaca “taageerayaasha iyo shuraakada ay bah-wadaagta yihiin”
Qoraal lagu daabacay boggageeda Twitter iyo Instagram, ayay shirkadda ku sheegtay in isbedelo la sameyn doono iyadoo waqtiga shatiga hadda socoda uu dhacayo dhamaadka sanadka soo socda.
Laakiin shirkaddu ma sheegin sida ay uga joojinayso in wax soo saarkeeda uu gaaro meelo aysan doonaynin in lagu iibiyo.
Shirkadda Ben & Jerry’s ma aysan sharraxin sababta go’aankan hadda loogu dhawaaqay – laakiin waxay sannado badan la kulmaysay cadaadis uga imanayay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimahan. Shirkadda Ben & Jerry’ waxaa sanaddii 1978 – asaasay Ben Cohen iyo Jerry Greenfield
Warshadda shirkadda ayaa ku taal Israa’iil islamarkana qoraal ay soo saartay ayay ku tiri: “Waxaan iskaashi dheer la leenahay cidda Shatiga na siisa, taasi oo soo saarta jalaatada Ben & Jerry ee loo iib geeyo guud ahaan gobolka.
Si kastaba ha ahaatee, Rai’sul wasaaraha Isra’iil Naftali Bennett ayaa si kulul u cambaareeyay go’aanka, asaga oo sheegay in shirkadda Ben & Jerry ay yihiin kuwo “anshax ahaan qaldan”.
“Qaadacaada Israa’iil – oo ah dimuqraadiyad ay ku hareeraysan yihiin jasiirado argagixiso – waxay ka tarjumaysaa gebi ahaanba, in jihada ay ka luntay,qaadacaaddu ma shaqeyneyso mana shaqeyn doonto, waxaanan kula dagaallameynaa awooddeena oo dhan, “ayuu yiri.
In ka badan 440,000 Israa’iiliyiin ah ayaa ku dhex nool qiyaastii 3 milyan oo Falastiiniyiin ah oo jooga Daanta Galbeed, dhulkaas oo Israa’iil ay qabsatay kuna qabsatay dagaalkii 1967.
Falastiiniyiinta ayaa sheegay in tani ay tahay xudunta dowladda mustaqbal isla markaana wadamada caalamka badankood ay u arkaan degaameynta Israel ee dhulka Falastiin inay tahay mid sharci darro.
Balse Israa’iil ayaa dhankooda arrintan ka soo horjeeda oo diidan.
Shirkadda Ben & Jerry’s ayaa waxaa asaasay sanaddii 1978 Ben Cohen iyo Jerry Greenfield – oo ahaa labo nin oo saaxiibo ah